Haddii kanaalka uu ka dhaco Istanbul, ma awoodo inaan soo booqano qabuuraha awowayaasheen | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulHaddii Channel-ka uu dhaco, ma awoodi doonno inaan booqanno qabuuraha awowayaasheen.
Haddii kanaalka lagu xaqiijiyo magaalada Istanbul, ma awoodi doonno inaan booqanno xabaalaha awowayaasheen.
Dadka deggan Baklalı Neighborhood, oo ku xiran Arnavutköy, oo daadadku ku fatahaan haddii ay dhacdo Canal Istanbul, ayaa ka walwalsan gaadiidka xabaasha. Dadka intiisa badani kuma qanacsanahay in qabuuraha agagaaraha mashruuca ee Kanal Istanbul la dhaqaajin doono.
Duqa Magaalada Istanbul (IMM) Duqa magaalada Ekrem Imamoglu, 25-kii Disembar 'Ya Kanal, Ya Istanbul' shir-jaraa'id oo uu ku sifeeyay hal-ku-dhigga sababta mucaaradka looga soo horjeedo Istanbul 15 qodob ayaa lagu sharxay. Maqaalka cinwaankiisu yahay 'Channel Istanbul Means, Burburinta Maskaxeed ", oo ka mid ah diidmada Madaxweyne İmamoğlu, wuxuu gudbiyay in 11 qabuurood oo ku yaal Arnavutköy ay saameyn ku yeelan doonaan mashruucan. Qabuuraha Baklalı ee haray ee mashruuca, dadka gobolka waxay ka walaacsan yihiin horumarada. Dadka deggan Baklalı waxay sheegeen in aan lagu wargalin Kanal Istanbul isla markaana ay tahay inay u deggaan wixii ay ka barteen saxaafadda isla markaana aysan dooneynin in xabaalahooda la raro.
K yaa jeclaan lahaa inuu la macaamilo awooweyaasha?
Iyadoo la raacayo Sharciga Magaalada Caasimadda ah ee 2014, Baklalı waxaa la siiyay maqaamka xaafad. Isbadalkan, Qabuuraha Baklalı waxay ku xirnaayeen Agaasinka IMM ee xabaalaha. Dadka reer Baklalı, xabaalaha waxay rabaan inay ilaashadaan dowladdan, waxay yiraahdaan way ka walwalsan yihiin Canal Istanbul awgood. Ma rabno in taasi dhacdo. Waxaan luminay odayaasha qoyskeena. Ma awoodno inaan booqanno ”.
Digirta, ka cawso in lagu wargalin mashruuca. Ömer Özkaya wuxuu sheegay inay saxaafada ka heli karaan macluumaad kusaabsan mashruuca iyaga xiiseynaya wuxuuna yiri, kala duwanaansho ayaa jira. Kulligeen halkaas ayaa lagu aasay. Aniga iyo Istanbul uma maleynayo inay noo fiicnaaneyso. Waxba igama gelin qabuuraha. Laakiin waxaan u arkaa kanaalka inuu yahay dhibaato oo aan daryeelo. ”
Dadka beanku ma rabaan in howsha lagu qabto meel ka baxsan naftooda. Ercüment Gülemek wuxuu sheegay inuu ka baran karo horumarka saxaafada wuxuuna yiri "Cidina nama siiso macluumaad. Xaqiiqdii ma rabno qabuuraha inay dhaqaaqaan. Ehelkayaga oo dhami dhinac bay u jiifsadaan. Cidina nama waydiin wax ku saabsan mashruuca kanaalka. Waxaan leenahay meel abtirsiinyo ah. Ka waran kuwan? Waxaan rabnaa in aan wax ka ogaano arintaan ..
“BURBURKA ayaa la barakicinayaa KI
Erol Samastı, oo la wadaagay walaaca ah in mashruucu uu qof walba oo guri la'aan ah dhigayo, ayaa yidhi, yakın Kulankii ugu horreeyay, ayaa la sheegay in ku dhawaad ​​hal milyan oo qof ay saameyn ku yeelan doonto. Waad barakicin doontaa waxaas oo dhan. Waxaad u qaybineysaa dadka halkan ku noolaa sannado. Waxaan ka nimid Trabzon. Farqi baa u dhexeeya dadka deegaanka iyo kan dambe. Waxaad dareemeysaa inaad tahay qaxooti. Hal milyan oo qof ayaa ku dhici doona xaaladdan mashruuca ”.
Remzi Demirkol wuxuu yiri dadku waa in aan laga barakicin dhulkooda hooyo. Annagu garan mayno dakhliga ama kharashka. Anigu ma ihi taageere mashruuca ı.
Isagoo xusaya in dadka tuuladu ku lug lahayeen mashruucan welwelkana waa la iska indha tiray intii lagu gudajiray wajigii mashruuca ee garoonka diyaaradaha Istanbul, Hasan Gungor wuxuu yiri:
Uz Ma rabno in xabaalaha la raro. Runtii ma jeceshahay kanaaladaan? Faa'iidooyin noocee ah ayey yeelan doontaa? Annagu taas garan mayno. Cidina nama siiso wax macluumaad ah. Dhamaanteen waxaan leenahay waalid, ayeeyo iyo ayeeyooyin halkaas jiifay. Sidee loo guuri karaa? Ma dooneynin taas. Shirka EIA ee garoonka diyaaradaha cusub. Ka tag dadka deegaanka, xitaa muhaajiriinta ayaan ka soo qeybgalin kulamadan. Shaqaalaha garoonka diyaaradaha ayaa buuxiyay hoolka. Xitaa mukhtarta ma gali karin. ”
“Uma faa’iideyso dalka”
Dadka gobolka ayaa u haysta in mashruuca uusan dalka wax ku soo kordhin karin. Ak Anigu waxaan ahay injineer madani. Waxaan ka qabtay mashruuc qalin-jabin ah oo ku saabsan biyo-xireenka. Waxay carqaladeysaa isku dheelitirka deegaanka, waxay carqaladeysaa biyo xireenka, carqaladeeyaan wax walba. Shaqo aan waligeed dhici doonin. Maxay xabaalaha dadka halkan u guurayaan? Intaa waxaa dheer, waxaan nahay dhaqaale ahaan adag. Mana aaminsani inay taasi dhici doonto. Kanaalka ayaa fikirkeyga ku jiri doonin, ayuu yiri.
Hami İnan wuxuu sharxay in Canal Istanbul aysan ugu faa iideysan karin ereyadan:
Muxuu soo celin karaa kanaalka? Wuu naga saarayaa halkan. Fikradeenna, waxay ka dhigan tahay in xabaalaha ay socdaan, dadku sidoo kale waa ay socdaan. Maaha shaqada saxda ah. Dadku ha ku nastaan ​​qabuurashooda. Waxaan ka soo horjeednaa in dadka qabriga loo keeno meel kale. Maaha inay sababtu tahay inuu qof doonayo.
“Dawladdu Waa Inay Aqoonsi Tahay”
Dadka deggan Baklalı ee taageera dhismaha Canal Istanbul sidoo kale waxay la wadaageen aragtidooda. Hüseyin Kuşçu, oo leh fikirka ah in naqshadeeyayaasha mashruuca ay wax ogaadaan, ayaa yiri, "Waxaan ku leeyahay qaraabo badan xabaalaha halkan. Hadday u wanaagsan tahay ummaddeena, waxaan leeyahay ”. Behzat Çakmak wuxuu sheegay in xabaalaha loo raray gobollo kale kahor sidaa darteedna uusan u arag wax dhibaato ah.
“Haddii dowladdu go’aamiso, ma lihin shaqsi ahaan shaqsi ahaan. Gobolku wuu sameynayaa waanan taageeri doonnaa. Qabuuraha waxaa sidoo kale laga dhaqaaqay Edirnekapı. Waxaa halkan lagu geeyay oo loo geeyay meel kale. Waa inay faa iido u leedahay dalka. ”
Turan Genç iyo Fahrettin Sinan, kuwaas oo ku raacay fikirka ah inaysan jirin wax dhibaato ah oo ka dhashay dhaqaajinta xabaalaha, waxay sheegeen inay jeclaan lahaayen in laga guuleysto maxaa yeelay waxay taageeri jireen mashruuca gobolka.
Nitralgic photoromania ilaa awowayaashii Metrobus Marka Waqti Ku Saabsan Istanbul
Booqasho weyn oo ka timid Bariga Faransa ee Canal Istanbul